10 akanakisa maficha eUbuntu 15.10 Wily Werewolf | la-manette.com
Ubuntu 15.10 ikozvino yaburitswa neCanonical uye inowanikwa pa kudhanilodha. Verenga chinyorwa ichi, dzidza nezve maficha eUbuntu 15.10, uye ita sarudzo yako yekusimudzira.
Mushure memwedzi mitanhatu yebudiriro, Ubuntu 15.10 Wily Werewolf yakaburitswa uye iripo yekurodha. Unogona kana dhawunirodha ISO mifananidzo, kana kusimudzira yako iripo Ubuntu 15.04 system.
Muchikamu chino, tichakuzivisa iwe kune gumi akanakisa maficha eUbuntu 10 Wily Werewolf. Ngatitarisei:
Ubuntu 15.10 yakavakirwa pane vhezheni 4.2 yekernel, iyo yakaburitswa mukupera kwaNyamavhuvhu.
Pakati pekuvandudzwa kukuru ku Linux 4.2, kune itsva kernel mutyairi rutsigiro rwe AMD GPUs, rutsigiro rutsva rweArM mabhodhi ekuvandudza, rutsigiro rweNV-DIMM, rutsigiro rweF2FS faira system encryption nezvimwe.
2. Kubatana 7.3.3 Kubatana Default Desktop Shell
Ubuntu's default desktop shell, Kubatana, yakagamuchira zvigadziriso zvidiki uye kuvandudzwa muvhezheni 15.10. Inopa tarisiro yeUnity 8, Canonical yechizvarwa chinotevera mushandisi interface. Imwe yeinonyanya kukosha shanduko ndeyekusiya kwaUbuntu kweUnity's akaturikidzana scrollbar.
Iwe unogona ikozvino kudhonza uye kudonhedza zvikumbiro kubva kuUnity Dash kuenda kudesktop, bhatani rechikamu chekubuda ikozvino rine chekuita nekudzvanya, keyboard kumusoro / pasi navigation inoshanda sekupuruzira muUnity Dash, uye zvimwe zvakawanda zvidiki kuvandudzwa.
Ubuntu Gadzira mutsara wemirairo utility inoita kuti zvive nyore kuisa yakakurumbira maturusi ekugadzira. Iko zvino inotsigira mamwe mapuratifomu, masevhisi uye masisitimu, pamwe nenzvimbo yekusimudzira Android pedzisa.
Verenga zvakare: Warzone Yakanakisa M16 yekurodha sarudzo: pwanya vavengi vako nepakati senge pro
4.OpenStack 2014 2.0
Ubuntu 15.10 ngarava ine OpenStack 2014 2.0, codenamed Liberty. Iyi yakavhurika sosi software yekuvaka yakazvimiririra uye yeruzhinji makore yave kuenderana neiyo Ubuntu budiriro kutenderera.
5. Inoramba iripo uye isina nyika network interface mazita
Iyo yazvino vhezheni yeUbuntu 15.10 Linux kugoverwa kunouya nemazita anoenderera uye asingaverengeki network interface. Izvi zvinoreva kuti ikozvino zvinogoneka kutumidza network network ine mamwe mazita anonyatsokodzera, ayo acharamba achishanda kunyangwe mushure mekutangazve kana shanduko yehardware.
Ne Ubuntu 15.10, iyo yekuvandudza GNOME 3.16.x yasvika uye akawanda eGNOME 3.16 maapplication akawedzerwa. Iyi vhezheni inogona zvakare kukwidziridzwa kuGNOME 3.18. Iyo MATE desktop inoshandiswa naBuntu MATE yave muvhezheni 1.10.
7. LXD mudziyo teknolojia
LXD yeContainers yakatanga muUbuntu 15.04, asi ikozvino yakagadzirwa yakagadzirira uye inouya neakawanda hunyanzvi semuchina chaiwo. Zvinoenderana neCanonical, iwe ikozvino wave kugona kutora zvipfupi uye rarama kutama kwemidziyo.
8. Steam controller rutsigiro
Ubuntu vhezheni 15.10 inotsigira Steam controller natively uye vatambi havadi chero zvigadziriso kana kugadziridzwa.
Zvese zvaunofanirwa kuita kuisa Steam uchishandisa iyo Ubuntu package muSoftware Center uye plug mune yako nyowani controller.
9. Tsigiro yeGCC 5 nePython 3.x
Ubuntu 15.10 yakasvika nerutsigiro rweGCC 5 nePython 3.x. Vagadziri vachafanira kumirira Ubuntu 16.04 LTS, iyo ichaita Python 3.x nekukasira.
Verenga zvakare: Maitiro ekuisa Google Play Store pane chero Huawei Smartphone neGooglefier
10. Zvishandiso zvakavandudzwa:
Nautilus (anonziwo 'Mafaira') 3.14.2
Totem (aka 'Mavhidhiyo') 3.16
Ubuntu 15.10 zvakare inotakura ine itsva default Wallpaper uye kuchengetedza kugadzirisa.
Dhawunirodha Ubuntu 15.10.
Wakada here zvinhu izvi zveUbuntu 15.10? Tizivise mumashoko ari pasi apa.